Miadihevitra Mikasika Izay Firenena Ambadiky Ny Famonoana An’i Kim Jong-nam i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2017 5:00 GMT
Pikantsary tamin'ny vaovao tamin'ny fahitalavitra NTDa.
Tamin'ny fampahalalam-baovao Tandrefana sy tao Korea Atsimo, noraisina avy hatrany ho famantarana lehibe amin'ny fitomboan'ny disadisa eo amin'i Shina sy i Korea Avaratra mpiara-dia aminy hafahafa ny famonoana an'i Kim Jong-Nam, rahalahin'ny filoha faratampony ao Korea Avaratra, Kim Jong-un tamin'ny 12 Febroary tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kuala Lumpur.
Ny tombatombana amin'ny ankapobeny, na dia tsy voamarina amin'izao fotoana izao aza dia hoe i Pyongyang no nanome baiko ny fitifirana ilay mpiray tam-po amin'ny fitondrana, izay nonina niaraka tamin'ny fianakaviany anankiroa tao Beijing sy Makaô eo ambanin'ny fiarovan'i Shina, mba hanafoanana izay mety ho mpiandrandra ny seza fiandrianana. Raha marina izany fiheverana izany, dia ho fahasahiranana lehibe ho an'i Beijing izany, izay miharatsy isan'andro ny fifandraisany amin'ny firenena komonista mpiray vody rindrina aminy.
Hatramin'izao, tsy nety naneho hevitra momba ny vaovao ny ankamaroan'ny trano fampahalalam-baovao miaraka amin'ny fanjakana, angamba maneho ny halemen'i Shina amin'ny fomba hiatrehana ny fivoaran'ny zava-nitranga. Azo antoka, fa taorian'ny tsikeran'i Shina tamin'ny politika ara-nokleary ao Korea Avaratra, tsy “akaiky toy ny nify sy ny molotra” intsony ny firenena roa tonta”, araka ny nolazain'ilay mpanorina ny Shina Maoderina Mao Tse-Tung indray mandeha.
Na izany aza, nandrava ny fahanginana miaraka amin'ny sahoan-dresaka manjaka amin'izany disadisa eo amin'ny roa tonta izany sy nanome tsiny an'i Korea Atsimo ireo nasionalista Shinoa mpaneho hevitra mitondra ny solomaso maintin'i Mao, mahita ny fanjakazakan'ny Amerikana ho fandrahonana lehibe manoloana ny firenena.
Miampanga an'i Seoul ho nahavita ny famonoana mba hahazoana ny fanohanan'ny vahoaka amin'ny fanapariahana rafi-piarovana iadiana amin'ny balafomanga, Fiarovana Ny Faritra Avo (Terminal High Altitude Area Defense)(THAAD) mampiadihevitra izay nanamafy ny disadisa amin'ny avaratra izy ireo.
Vitsy amin'ireo mpiserasera Weibo Shinoa mitovy amin'ny Twitter no miombon-kevitra amin'izany, na izany aza.
Nanonona voalohany ny teorian'ny teti-dratsy antserasera tamin'ny tati-baovaony tamin'ny 17 Febroary ny Global Times manohana ny nasionalista:
Misy ny teti-dratsy antserasera izay mety nahatafiditra ny [governemanta] ao Korea Atsimo tamin'ny zava-nitranga satria mankahala an'i Korea Avaratra izy ireo. Mety namono an'i Kim Jong-nam izy ireo ary nanome tsiny an'i Korea Avaratra amin'izany, amin'izay miampanga an'i Pyongyang ny fiarahamonina iraisampirenena.
Avy eo ny gazety nanonona an'i Lu Chao, mpikaroka ao amin'ny akademian'ny siansa sosialy ao Liaoning mba hanohanana ny teorian'ny teti-dratsy:
Faly tamin'ny vaovao momba ny fahafatesan'i Kim Jong-nam ireo mpanao politika sy fampahalalam-baovao Koreana Tatsimo. Manohy mamoaka “vaovao farany” [momba ny lohahevitra] ireo fampahalalam-baovao ireo. Tahaka ny ataon'ny zavamahadomelina LSD ny vokatry ny zava-nitranga. Mahita ny vaovao ho “baomba mahery vaika” i Korea Atsimo mba hanalana baraka sy hampikorontana an'i Korea Avaratra. Avy amin'izany fomba fijery izany, tsy vaovao intsony izany fa efa teti-dratsy ara-politika.
Toa mahita ny rafitra THAAD tohanan'ny Korea Atsimo-Amerikana ho fandrahonana goavana amin'ny fiarovam-pirenena Shinoa tsy tahaka ny andrana noklearin'i Korea Avaratra ireo mpaneho hevitra tahaka an'i Lu Chao, na dia eo aza ny fitomboan'ny porofo fa rariny loatra i Shina raha matahotra tahaka ireo firenena hafa ao amin'ny faritra ny fitondran'i Kim Jong tsy hay mihitsy izay zavatra ho ataony.
Tao amin'ny Twitter, niampanga izay mbola manohana an'i Korea Avaratra ilay mpanao gazety Shinoa malaza Gao Yu:
Ny famonoana an'i Kim Jong-nam tao Malezia dia trangam-pampihorohoroana. Saingy vao avy nandre mpampianatra ambony roa niresaka tamin'ny VOA aho ary nilaza fa tsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisan'i Korea Avaratra amin'i Shina ny zava-nitranga satria ny fijanonan'i Kim Jong-un eo amin'ny fahefana dia miteraka olana ho an'ny filohan'i Etazonia Trump. Mampihorohoro tokoa ireo mpampianatra ambony sahisahy ireo. Ny fomba fijerin'izy ireo dia milaza amin'izao tontolo izao manohana an'i Kim Jong-un, ilay adala namono ny dadatoany sy ny rahalahiny .
Tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Weibo tamin'ny tati-baovaon'ny Foiben'ny Fahitalavitra Shina mikasika ny lohahevitra, nilaza ny faharesen-dahatrany ny ankamaroan'ireo mpaneho hevitra fa i Korea Avaratra no tena meloka tamin'ny famonoana olona.
Mahafantatra izao tontolo izao fa ny zava-nitranga dia hetsika ataon'i Fatty ilay Fahatelo (Kim Jong-un) ho fanoherana an'i Shina. […] Nandefa balafomanga ny fatty ary nanantena ny Shinoa hanohana ny hetsiny. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity, niampanga an'i Korea Avaratra i Shina ary nilaza fa hitsahatra tsy hanohana an'i Korea Avaratra intsony (ary nandràra ny fanafarana arintany any Korea Avaratra). Rava ny fifandraisana. Niahiahy i Fatty fa hanohana ny reformista Jong-nam mba handray ny fitondrana i Shina … ka nisy namono i Jong-nam.
Ireo adala ihany no mihevitra fa rahalahy zandrin'i Shina i Korea Avaratra […] Tsy manana hery ara-politika ao Korea Avaratra i Shina, saingy tsy maintsy manome famatsiana ho an'ny firenena.
Ny fahatsapako dia i Shina no hanampy amin'ny fampihavanana an'i Korea Atsimo sy Avaratra. Raha ho an’ ny THAAD izay fandrahonana ho an'ny fiarovam-pirenena Shinoa… mbola lavidavitra kokoa izany. Rehefa tafakambana ihany ny roa tonta vao hahita filaminana i Shina avaratra-atsinanana sy [ny faritra]. Saingy tsy maintsy manampy i Shina … raha i Etazonia no mitarika ny fampihavanana, mety ho tantara hafa indray izany.
Tsy tahaka ireo manam-pahaizana sasany ambonin'ny seza, matahotra kokoa an'i Korea Avaratra tsy toy ny fahatahoran'izy ireo ny THAAD sy an'i Korea Atsimo ireo mponina ao amin'ny faritra avaratra-atsinanan'i Shina:
Tsy te-hiteny betsaka aho. Ny hany fantatro dia noho ny andrana noklearin'i Kim Jong-un, dia niaina horohoron-tany vitsivitsy isika teto. Nitranga tamin'ny herintaona ny horohoron-tany lehibe indrindra, izay tsy maintsy nandositra tany amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena ny ankizy tany an-tsekoly ary nanapa-kevitra hampiato ny fampianarana ireo mpampianatra noho ny ahiahy ara-piarovana. Ho an'ireo midera an'i [Kim Jong-un], hevero azafady ny fiarovana ao Shina Avaratra-atsinanana. Ary aza adinoina fa Shinoa ianao.